သင်ခန်းစာ (၅) ထမြောက်ခြင်း အရှင်သခင် ယေရှုခရစ်တော် (Bible Study)
သင်ခန်းစာ (၅) ထမြောက်ခြင်း အရှင်သခင် ယေရှုခရစ်တော်...
Myanmar Salvation Lesson_5
Myanmar Salvation Lesson_8
Myanmar Salvation Lesson_7
သင်ခန်းစာ (၁၀) ကိုယ်ခန္ဓာ၊ စိတ်၊ ၀ိညာဉ်
Salvation သင်ခန်းစာ (၁၁) ပညတ်တော်.pdf
Myanmar Salvation Lesson_6
Myanmar Salvation Lesson 8
Myanmar Salvation Lesson_4
သင်ခန်းစာ (၄) ဘုရားသခင်၏ သိုးသငယ်တော် ယေရှုခရစ် (Bible Study).pdf
Myanmar Salvation Lesson_2
သင်ခန်းစာ (၂) တန်ခိုးကြီးသော ဘုရား သခင်ယေရှုခရစ် (Bible Study).pdf
ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဏ္ဍာကို စီမံခန့်ခွဲခြင်း Practical Christian Living Course.pdf
သင်ခန်းစာ (၃) အကောင်းဆုံး ရွေးချယ်မှု (Bible Study).pdf
U Pho Kyar - 37 min
သင်ခန်းစာ ၉ သာ၍ကြီးမြတ်သော ယဇ်ပုရောဟိတ်
သင်ခန်းစာ (၁) ဂတိတော်နှင့်ဆိုင်သော ကယ်တင်ရှင် ယေရှုခရစ် (Bible Study).pdf
ထထမြောကက် ခြငက်းအရရ င င်သခငက် ထယြရှုခရစက် ထတာကြ် (Bible
Thursday, 04 February 2010 13:42 administrator
ထထမြောကက် ခြငက်းအရရ င င်သခငက် ထယြရှုခရစက် ထတာကြ်
သငင်ခ နက်းစာ (၅)
''အသကက် ရရှငက်သော သသူ လညက်းဖြစက် ၏။ ငါသညည်အ ရငက် သေသညက် ဖြစက် ၍၊ ကမ္ဘာအဆကက်ဆ ကက်
အသကက် နရြှ ငက် င့်ပြညက် င့်စစံြု၏။...''(ဗဗာ၊၁း၁၈)
ခခစစစ်စွာထသြာ မမိ တက်ထဆဆွ၊
င်သ က် ခဗစစ်ခငင်ရသသူတဥဦး၏သင်္ခဗြုိငက်းတတငက်းအနား ရပက် နေခခင့် ဘသူးပါသလား။
သငက် ၏အတလနက်မြတက် နြိုးခဗစစ်ခငင်ရသသူ၏ကို ယစ်ခ န္ဓာကို မြေသို့  ခေဗနစဥက် ကြညက် ရင့်ှုလဗကက်
အတလနက်ဝမက်းနညက်းခခင့် ရပါသလား။ သို့ ဖြစက် သောကြ် သြေခြငက်းသညက်
ရန င်သူဖြစက် ကြောငက်းသင ည
င်သ က် နားလညက် ရပြဦး။ တကျနြုပပို့မေသမရှဦ
တကျနြုပပို့အတတကက် သခငက် ယေရှု
ခဗဦဆြောငက် ခြငက်းငရှါတြကလာခခင့် ခြငက်းမရရှိ ခခင့်သြေးလရှ ဗြငက် တကျနြုပပို့အေယာကကဦ တိုငက်းသြေခြငက်းကို
ဖြတင်သ နက်းရေပလိ မက် င့်မညက် ။ ကဗမက်းစာက''လသူ သညညိုနြောကက တခါတညက်
းသြေ၍...''ဟုဆို သညက် ။
တကျနြုပပို့သညက် ခရစက် တြော်ိုတကျနြုပပို့၏ကယပ ငက် ရရှငည်ြအ ဖစက်
ယစံြုကြည်ိုးစားပြဦးခခင့် သြောကြ် သြေခြငက်းကို တကျနြုပပို့ ကြောကက ရာမလို တြောင့်ပါ။ ဤရန င်သူ
သြေခြငက်းကို ယြေရှုခရစက် တောင်ြသညက် အြောငက် နြို ငစ်ခခ င့်သြောကြောငက် င့် ဖြစက် ၏။ ကဗမက်းစာက ဆို သညကာရှ
သသူ သညက် သြေခြငက်း၏တနစ်ခိုး ကို ခဗြုိးဖဗကစ်ခခ င့်ပြဦ ၊ ဧဝစံ ဂြေလိ သတငက်းအားဖြငက် င့် ထာဝရအသက်ို
တကျနြုပပို့ထစံ ယသူ ဆြောငာင်လ ခခင့် ၏။
''ဧဝစံ ဂြေလိ '' ဟသူ သြောစကား၏အဓိ ပ္ပါယကာရှ ''သတငက်းကြောငက်း''ဖြစက် ပြဦး
တမနက်တောက်ြပေါလု က ဘယ် ခ သ
င့်ို့ သော သတငက်းကြောငက်းဖြစက် ကြောငက်းကို တကျနြုပပို့အား
ပြောခခင့် ၏။ ပြေါလု က''ညဦ အစုိ တို့ ၊ ငါသညင်သ ငုပိ့ အား ဟြောပြောဘသူးသညက် နရြှ ငက် င့်အညဦ ၊ သငုပိ့ သညက်
ခစံ ယသူ ၍ မရှဦ ဝခဆညက်းကပက် သော ဧဝစံ ဂြေလိ တရားကို သငပို့အား တဖနနါကြားလို ကက် ၏။ ငါသညက် ကို ယပိုငက်
ခစံ ယသူ သညက် င့် အတို ငက်း....ခရစက် တောင်ြသညက် ကဗမက်းစာလာသညက် အ
င့် တို ငက်းငါတို့ အပြစက် ကြောငက် င့်
အေသခစံ တြောကြူ၏။-သင်္ဂြုြိဟက်ပြဦးမရှ ၊ ကဗမက်းစာ လာသညက် င့် အတို ငက်းသစံြုးရကက်
မြောကက် သောနြေ့၌ ထေမြာကက် တောကြူ၏။''ဟုဆို ၏။(၁ကော၊၁၅း၁,၃,၄)
.ဤကဗမက်းပို ဒက ရှ သခငက် ယေရှုခရစက် ၏ဧဝစံ ဂြေလိ တရားသညက် ကြဦးစစာသြော သမ္မာတရား နြရြှ စဗစ်ခ ကေည်အ ပါ် တညက် နေကြာငက်းတကျနြုပပို့ တြေတ့မြငင်ရ သညက် ။ (၁) ခရစက် တောကြ် တကျနြုပပို့၏အပြစကဗားအတတကေည်အ သခစံ ၏။ (၂) ခရစက် တောကြ် သြေခြငက်းမရှ ထေမြာကစ်ခခ င့်၏။ ကဗမက်းစာက တကျနြုပပို့အား ဘုရားသခင ည င်သ က် အခဗြုိ့သောလသူ မဗားကို သြေခြငက်းမရှ ထေမြာကစ်ခခ င့်ကြောငက်းအမရှ နက်ဖြစင်ရ ပဗကားကို ပြောပါ၏။ မညင်သို့ပငက် ဖြစက် စေ ဖြစစဗကကှုတို ငက်း၌ ဤလသူ မဗားသညက် နြောကစိုငက်းတတငက် သြေခခင့် ကြ၏။ သို့ သောကြ် သခငက် ယေရှုမသူ ကား ထို ကခင့် သို့ မဟုတစါ။ သသူ သညက် သင်္ခဗြုိငက်းမရှ ထေမြာကစ်ခခ င့်ပြဦး၊ နြောကပ ဖနက် ဘယက် သောအခါမရှ ဗြ မေသေတာင့်ပါ။ ယြေရှုက''အသကက် ရရှငက်သော သသူ လညက်းဖြစက် ၏။ ငါသညက် အရငက် သြေသညက် ဖြစက် ၍၊ ကမ္ဘာအဆကက်ဆ ကက် အသကက် နရြှ ငက် င့်ပြညက် င့်စစံြု၏။..၂ဝ) ဂဗဂးမဗားစစာက ယြေရှုသညက် ဘုရားသခငက် ၏သားတြောက်ြဖြစက် ကြောငက်းကို မယစံြုကြညက် ကြပါ။ သသူ တို့ သညက် ယြေရှုကို မုနက်းကြပြဦး၊ သသူ့ ကို သတင်ရ နက် အလို ရရှိ ၏။ ဖြစင်ရ ပခပု၌ သသူ တို့ က ယြေရှုကို သသူ သညက် ဘုရားသခငက် ၏သားတြောကြ် အစစည်အမရှနက် ဖြစက် ကြောငက်းကို နိမိတင်လက္ခဏာဖြငက် င့် ပြရနက် ပြောဆို ကြ၏။ ယြေရှုက သသူ တို့ ကို ပေရာဖကက် ယောန၏နိမိတင်လက္ခဏာတခုကို ပြမညက် ဖြစက် ကြောငက်းကို ပြော၏။ ယြေရှုက'' ယြောနသညက် ငါကြဦးဝမက်းထခ မရှာ သစံြုးရကက် နေရသကခင့် သို့ ၊ လသူ သားသညက် မြေ ကြဦးထခ မရှာ သစံြုးရကက် နေရလတစံင့် ။''ဟုဆို ၏။(မ၊၁၂း၎ဝ) ယြေရှုသညက် ဘာကို ဆို လို ပါသနညက်း။ ယြောနသညက် ငါးကြဦး၏ဝမက်းတတငက်းသစံြုးရကက် နရြှ ငက် င့်သစံြုးည နြေခခင့် ရသကခင့် သို့  သသူ သညက် လညက်းသင်္ခဗြုိငက်း တတငက် သစံြုးနြေ့နရြှ ငက် င့်သစံြုးညေနမညက် ဖြစက် ကြောငက်းပြောခခင့် ၏။ ထို နြောကက် သသူ သညပ ဖနေ ညမြာကင်လိမက်မင့် ညက် ။ သသူ ၏ရရှ ငက်ပြနက် ထေမြာကက် ခြငက်းက သသူ သညက် ဘုရားသခငက် ၏သားစစက် ဖြစက် ကြောငက်းနိမိတင်လက္ခဏာသကက် သေ ဖြစင်လိ မက် င့်မညက် ။ ထယြရှု ကါးတမိကို င န်ထေ ဆကက်တွ ငက် ထအသသတင်ခတ်ခံ ခခခဲ့ ခြငက်းသခငက် ယေရှုသည်ားစင ည တကပ ငက် နစံ နက်ိုးနာရဦ တတငက် ရိုကညားခြငက်းကို ခစံ ရပြဦး၊ စမနက်းလလခ သစြုံးနာ၌အသကက် တြော်ိုစစနက့် တြောကြူခခင့် ၏။ စမနက်းတညက် ခင့် ဗိနကစ၍သစံ ရှြုးနာရဦ တိုငက် အောငက် တေလာကလစံြုးသညက် မခ မြေရှာင င်လဗကက် ရရှိ၏။ ထို နြောကက် ယြေရှုသညက် ငို တြေကး လဗကက် ''အမှုပြဦးပြဦ ''ဟု မိ နက့်တောကြူပြဦးနြောကက် အသကက် တြော်ိုစစနက့်တောကြူ၏။ ထို အခါ ခဏခြငက်းပငက် ဗိ မာနက်တောကြ်၏ ကုလားကာသညက် အထတကက နက်း မရှ အြောတကက နက်းတို ငက် အောငက် စုလတ် ခ လြေ၏။ ကြဦးစစာသြောမြေကြဦးလှုပက် လေ၏။ ကြေဗာကကဗားတို့ သညက် လကခ ပြားကြ၏။ .''ဟုဆို ၏။(ဗဗာ၊၁း၁၈) ထယြရှုသညက် သသူ ၏ရရ ငက်ပြထနြ န်ထေ မြာကက် ခြငက်းထအကြာငက်းကမိကို ကြမိြုတငက် ၍ထပြာခခခဲ့ ၏ သခငက် ယေရှုက တပညက် င့်တြောကြဗားအား ပြောခခင့် သညကာရှ သသူ သညည်ဒုက္ခဆငက်းရခ ခြငက်းကို ခစံ ရမညက် ။ အေသသတက် ခြငက်းကို ခစံ ရမညက် ၊ ထို မရှ သစံြုးရကက် ပြဦး၊ နြောကပ ဖနက် ထေမြာကင်လိမက် င့်မညက် ။ ယြေရှုက'' ခဏကြာပြဦးမရှ သငပို့သညက် ငါကို မမြငင်ရ ကြ။ တဖနစ်ခဏကြာပြဦးမရှ ငါင့်ကို မြငက် ပြနက်ကြ လိ မက်မင့် ညက် (သသူ သညက် တဖနေ ညမြာကင်လိမက် င့်မညက် ဖြစက် သောကြောငက် င့် )။ အေကြာငက်းမသူ ကားငါသညက် ခမညက်းတြောညြစံသို့  တသားမညက် ဟု မိ နက့်တောကြူ၏။ -ငါ အမရှ နက ည်အ နုသည် က်ဆိား၊ သငပို့သညက် ငို တြေကး မညပ မက်းခြငက်းရရှိကြလိ မက်မင့် ညက် ။ လြောကဦ သားတို့  သညက် ဝမက်းမြောကက် ခြငက်းရရှိကြလိ မက်မင့် ညက် ။ သငပို့မသူ ကား ဝမက်းနညက်းခြငက်းရရှိသြောင်ြလညက်း၊ ထို ဝမက်းနညက်းခြငက်းသညက် တဖနက် ဝမက်းမြောကက် ခြငက်းဖြစင်လိ မက် င့်မညက် ။''ဟု ဆို ၏။ (ယြော၊၁၆း၁၆.
ထို နြောကက ရှ ယြေရှုသြေပြဦးနြောကက် ရြောမစစာင်သးမဗား ရြောကင်လာကြ၏။ ယြေရှု၏ဘြေးရရှိ လကက် ဝါးကပပိုငက် ပေါ် ရိုကက် ထားသြော သသူ နရြှ စက်ယောကက် ၏ခြေကို ခဗြုိးကြ၏။ သို့ သောကြ် ယြေရှုထစံ သို့ ရောကက် သောကြ် သသူ သညက် သြေနရြှ ငက် င့်ပြဦးကြောငက်းကို တြေတ့မြင ဗြ င်လ ရှ ငက် ခြေ ကို မခဗြုိးဘခ နြေကြ၏။ ထို အေကြာငက်းအရာကား ကယပ ငက် ရရှငက်၏ကို ယက ရှ အရိုးတေခဗာငက်းမရှ ဗြ မကဗြုိးရဟု (ဆာလစံ ၊၃၄း၂ဝ) အရ ပေရာဖကက် ပြု ခခင့်သြော ကဗမက်းစာလာခဗက်ို တို ကက် ရိုကက် ပြညက် စင့် စံြုခြငက်းအေကြာငက်းဖြစက် ၏။ ထယြရှုကမိကို သင်္ဂြု မြိသက်မြု ပက်နရြတ်ခံ ခြငက်းအရိ မသခ မြိြု့သားယြောသပက် ဖြစက် သော သသူ ဌြေးတေယာကင်သ ညက် ပိ လတက ငက်းထစံ လာပြဦးယြေရှု၏အေလာငက်းတြော်ိုယသူ တသား မညက် ငေ့် အကြာငက်းအစခငက် င့်တြောငက်း၏။ ပိ လတက ငက်းသညက် ယြေရှုေသြေကြာငက်းကို အေသအခြာသိ လရှဗြငက် ယြောသပက် ၏တြောငက်းဆို ခဗက်ို စခငက် င့်ပြု လြေ၏။ ယြောသပက် နရြှ ငက် င့်အခြားသြောတပညက် င့်တြောက်ြဖြစက် သော နိကြောဒငပို့သညင်လာ၍ ယြေရှု၏အေလာငက်းကို သင်္ဂြုြိသင်ရနက် ပြင င က်ဆ က် လြေ၏။ သသူ ၏အေလာငက်းတြော်ိုပိ တစုဆိုးဖြငက် င့် ပတင်ရ စက်ကြ၏။ ယြေရှု၏ကို ယစ်ခ န္ဓာတတငက် ဒါဏင်ရာမဗားရရှိ ၍ အဝတတပ ငက် မြွြှေးကြိြုငက်သော နစံ သာမဗားကို ထညက် င့်လဗကက် ပတင်ရ စက်လေ၏။ ယြေရှု၏အေလာငက်းတြော်ိုကြေဗာတကပ ငက် တထငက်းထားသြော၊ တေယာက်ိုမရှ ဗြ မသင်္ဂြုြိသသ်ဘူးသြော၊ သင်္ခဗြုိငက်းတတငက်းသစက် တခု တတငက် မြု ပက်နရြှစံ ကြ၏။ ကြဦးစစာသြောကြေဗာကက် ဖြငက် င့် သင်္ခဗြုိငက်းဂသူ တစံ ခါး အဝကို ပိ တစ်ခခ င့်ကြ၏။ ယြေရှု၏တပညက် ငေ့် တြာကြဗားသညက် သသူ ၏အေလာငက်းကို ခိုးယသူ နြို ငက် ပြဦးသင်္ခဗြုိငက်းမရှ ထေမြာကက် ကြောငက်းကို တြေကးကြောကြာကို ရှ ဖာရိ ရရှခတို့ သညက် ကြောကင်သ ဖြငက် င့် သင်္ခဗြုိငက်းဂသူ ကို စြေါငက် င့်ကြပင်ရ နက် ရြောမစစာင်သးမဗားကို တာဝနစ်ခဗထားပြေးရနက် ပိ လတက ငက်းထစံ တြောငက်းဆို ကြ၏။ ပိ လတက ငက်းသညက် သသူ တို့ ၏တြောငက်းဆို ခြငက်းကို စခငက် င့်ပြု ခခင့်၏။ ထယြရှု သင်္ခခြုမြိငက်းမရ ထထမြောကင်ခ ခ ခဲ့ခြငက်းယြေရှု၏အေလာငက်းသညက် သင်္ခဗြုိငက်းဂသူ အတတငက်းသစံြုးရကက် နရြှ ငက် င့်သစံြုးည လညက်းလြေရှ ဗြာငက်းခခင့် ၏။ တတိ ယေမြာကက် သောနြေ့ နစံ နကက် မိုးမလငက်းမဦ ရြှ သခငက် ယေရှုသညက် သြေခြငက်းမရှ ထေမြာကစ်ခခ င့်၏။ ထို နြောကက ရှ ကြဦးစစာသြော မြေငလရှ ဗြငက် လှုပက် လေ၏။ ထာဝရဘုရား၏ ကြောငက်းကငပမန ည င်သ က် ကြောငက်းကငစံြ သ်ဘုမရှ ဆငက်းလာပြဦး၊ ဂသူ တစံ ခါးဝ၌ ပိ တင်လဗကက်ရရှိသြော ကြေဗာက်ို လိ မက်လ င့် ရှ နစ်ခခ င့်၏။ ကဗမက်းစာက ရြောမ စစာင်သးတို့ သညက် '' ကြောကက် ရစစံ့  သဖြငက် င့် တုနှုင်လ ပက် ၍ သြေမတတက် ဖြစက် ကြ၏''ဟုဆို ၏။ ထို နြေ့ နစံ နကက် စောစြောတတငက် အမဗြုိးသမဦးသစံြုးဥဦးတို့ သညက် ယြေရှု၏သင်္ခဗြုိငက်းဂသူ သို့  လာကြ၏။ယြေရှု၏အေလာငက်းကို နစံ့ သာမဗြုိးနြရြှ ငက် င့်ပြင င က်ဆ က် ရနက် လာခြငက်းဖြစက် ၏။ သို့ သောကြ် သသူ တို့  ရြောကက် သောအခါ သင်္ခဗြုိငက်းသညက် ဗလာ ဖြစက် ကြောငက်းကို သာတြေတ့ကြ၏။ ကြောငက်းကငပမန်သသူ တို့ အား ''ကြောကက် ရစံ စ့ ခြငက်းမရရှိ ကြနရြှ ငက် င့်။ လကက် ဝါးကပပိုငကာရှ သတက် သော ယြေရှုကို သငပို့ရရှာကြသည်ို ငါသိ ၏။ ဤ အရပက် ၌မရရှိ ။ မိ နက့်တောကြူသညက် အတို ငက်းထေမြာကက် တောကြူပြဦ ။.''ဟုဆို ၏။ အမဗြုိးသမဦးတို့ သညက် ယြေရှုထေမြာကက် ကြောငက်းကို တပညက် ငေ့် တြာပြို့အား ကြားပြောရနက် နြောကင်သို့ ပြနက်ပြေးတသားကြ၏။ သသူ တို့ သညက် ပြေတရုနရြှ ငက် င့်ယြောဟနုိ တြေတ့ပြဦးသသူ တို့ မြငစ်ခခ င့်၊ ကြားခခင့် သမရှ ဗြတို့ကို ကြားပြောလြေ၏။ ...
ငါင့်လက်ို ကြညက်ြ င့် ကေလာင့်။ ငါင့်ခြေကို လညက်းကြညက် င့်ကြေလာင့်။ ငါင့် ကို ယစ ငက်ဖြစက် ၏။ ငါင့်ကို ကြညက် ရင့်ှုစမက်းသပက် ကြေလာင့်။ ငါသညက် သငပို့မြင ည င်သ က် အတို ငက်းအရိုးအသား နြရြှ ငက် င့် ပြညက် င့်စစံြု၏။ တေစ္ဆမညင်သ ည်ား ဤကခင့် သို့  မပြညက် စင့် စံြု ''ဟု မိ နက့်တောကြူ၏။ တပညက် ငေ့် တြာပြို့သညက် ယြေရှုကို ကြညက် လ င့် ဗကက် အစံင့် သြကြ၏။ ယြေရှုက''သငပို့၌ စားစရာ တစစံြုတခု ရရှိ သေလာ။''ဟု မြေး တြောကြူ၏။ သသူ တို့ သညက် ငါးကငပပိုငက်းနြရြှ ငက် င့်ပဗားလပို့ ကို ပြေးကြ၏။ ယြေရှုသညက် သသူ တို့ အေရရှ့ ၌ စားတြောကြူ၏။ ယြေရှုသညက် သင်္ခဗြုိငက်းမရှ သသူ ၏အရိုး၊ အသားခန္ဓာကို ယက် နရြှ ငက် င့် ထေမြာကစ်ခခ င့်ပြဦး။ တပညက် င့်တြောကြဗား မည် ခ သ င့်ို့ သိ သနညက်း။ သသူ တို့  သသူ့ ကို မြငက် ကြ၏။ သသူ့ ကို တို့ ထိ စမက်းသပက် ကြ၏။ သသူ နရြှ ငက် င့်အတသူ စကားပြောဆို ကြ၏။ သသူ နရြှ ငက် င့်အတသူ စားကြ၏။ တပညက် ငေ့် တြာကြဗားသညက် သြောမအား ရရှာတြေတ့ပြဦးသတငက်းကြောငက်းကို ပြောရနက် မေစါငက် င့်နြို ငစ်ခခ င့်ကြပါ။ သသူ တို့  သြောမကို ယြေရှု အသကက် ရရှ ငက်ကြောငက်းကို ပြောသြောအခါ၊ သြောမကလညက်းသသူ တို့ ကို မယစံြုပါ။ သသူ က '' သစံ ရိုကင်ရာခဗက်ို မမြငက် ၊ သစံ ရိုကင်ရာခဗက်ို လကက် ညြှြိုးနြရြှ ငက် င့်မတို့ မစမက်း၊ နစံ ဖြေးတြော်ိုလညက်းလကက် နရြှ ငက် င့်မစမက်းမသပင်ရ လရှဗြငက် အတကျနု ပက ယစြုံ ''ဟုဆို ၏။(ယြော၊၂ဝး၂၅) .ပြေတရုနရြှ ငက် င့်ယြောဟန ည င်သ က် သင်္ခဗြုိငက်း သို့  ပြေးတသားကြ၏။ သသူ တို့  သင်္ခဗြုိငင်ဂူသို့  ရြောကက် သောအခါ အစံင့် စဖယက် မြတင်ငက်းကို တြေတ့ကြ၏။ ယြေရှု၏အေလာငက်းကို ပတင်ရစ င်လဗကက် ရရှိသြော ပိ တစုဆိုးသညက် ပစံြုမပဗကသ်ဘခ ရရှိ လဗကက်နေ၏။ လသူ ၏ပစံြုစစံ အတို ငက်းပငက် ရရှိ နြေပြဦးသို့ သောကြ် ယြေရှု၏ခန္ဓာမသူ ကား မရရှိ တြောင့်ပါ။ ခြေါငက်းတြောကြ်၌ရရှိ သြော ပုဝါသညက် ပိ တစုဆိုးနြရြှ ငက် င့်အတသူ မရရှိ ဘခ တခြားစဦ လိပ င်လဗကက် ထြောငက် င့် တခု၌ရရှိ နြေ၏။ ယြေရှု ထေမြာကစ်ခခ င့်ပြဦ ။ တပညက် ငေ့် တြာကြဗား တထတကင်သားပြဦးနြောကက် မာရိ မာကဒလသညက် သင်္ခဗြုိငက်းဂသူ အပြင သ်ဘ တကပ ငက် ငို တြေကးလဗကက် ရပက် နေ၏။ သသူ မ သညနစံြု့၍ တတငက်းထခ သို့ကြညက် လ င့် ရှ ဗြငက် ကြောငက်းကငပမနက် နြရြှ စစါးကို မြငက် လေ၏။ သသူ တို့ က သသူ မအား ''အခဗငက်းမိ နက်းမ အဘယက် ကြောငက် င့် ငို တြေကးသနညက်း။ ''ဟု မြေးလရှ ဗြငက် မာရိ က''တကျနက၏သခငုိ ယသူ တသားကြပြဦး။ အဘယကာရှ ထားကြသည်ို မသိ ပါ''ဟု ပြောဆို ၏။ ထို သို့ ဆို ပြဦးမရှ နြောကင်သို့လရှ ညက်လ င့် ရှ ဗြငက် လသူ တေယာကင်သ ညက် သသူ မအား စကားပြောတြောကြူ၏။ ထိသူ သသူ သညက် ယြေရှု ကို ယက် တောကြ် တို ငက် ဖြစက် ၏။ သသူ က''အခဗငက်းမိ နက်းမ အဘယက် ကြောငက် င့် ငို တြေကးသနညက်း။ အဘယင်သူကို ရရှာသနညက်း။''ဟုမြေးတြောကြူ၏။ မာရိ သညက် မြေရှာကြ် မကြညက် ဘ င့် ခ နရြှ ငက် င့် သသူ့ ကို ဥယဗာဥက်စောငက် င့် ဖြစ ည င်သ က် ဟု ထငက တက် ရှ ၏။ ယြေရှုက တဖနက် ''မာရိ ''ဟု ခြေါ်လရှ ဗြငက် သသူ မသညက် သခငက် ယေရှုကို မရှ တိက ပြဦး''အရရှ င သ်ဘုရား''ဟု ထသူးတြောကြူ၏။ ထို ည တပညက် င့်တြောကြ် ဆယက် ယောကပို့သညက် ထို နြေ့တာ၏ ထသူးခြားသြော အဖြစည်အပဗကဗကားကို ပြောဆို ရနက် ပိ တညားလဗကက်ရရှိသြော အခနက်းတတငက် တြေတ့ဆစံြုကြ၏။ သြောမသညက် သသူ တို့ နရြှ ငက် င့်အတသူ မရရှိ ပါ။ ဂဗဂးမဗားကို ကြောကက် သောကြောငက် င့် တစံ ခါးသညက် ပိ တက် လဗကက် ရရှိ ၏။ ရုတပ ရကက် သသူ တို့ ၏အလယက် ၌ ယြေရှုသညက် ပေါ်လာပြဦး''သငပို့၌ ငြိမ က င်သ က် ခြငက်းရရှိ စြေသတညက်း''ဟု မိ နက့်တောကြူ၏။ တပညက် င့် တြောပြို့ သညက် ကြောကက် ရစံ စ့ ကြ၏။ တပညက် င့်တြောပြို့သညက် ယြေရှုကို တေစ္ဆ ဖြစ ည င်သ က် ဟု ထငက တက် ရှ က်ြကြ၏။ ယြေရှုက ''ကို ယက် တြော်လညက်း၊ အဘယက် ကြောငက် င့် တုနှုင်လ ပက် ခြငက်းရရှိကြသနညက်း။ အဘယက် ကြောငက် င့် အထသူးထသူးအေတေထတထ သြော စိ တင်ရိြ ရှ ကသနညက်း။ .
...''ဟုဆို ၏။(ရြော၊၁း၃-၄) ထယြရှု၏ရရ ငက်ပြထနြ န်ထေ မြာကက် ခြငက်းသညက် ဆကျနကြိုပုက်တွမိ့ ၏ရရ ငက်ပြထန န်ထမြောကက် ခြငက်းကမိကို အာမခတ်ခံ ခခကက်ထပးပါသညက် ။ .''ဟုဆို ၏။(ဗဗာ၊၁း၁၈) ထယြရှု၏ထသြခြငက်းမရ ရရငက်ပြထနြ န်ထေ မြာကက် ခြငက်းသညက် သသူ သညက် ဘကို ရားသခငက် ၏သားထတြာက်ြဖြစက် ထကြာငက်းသကက် ထသဖြစင်သညက်။ ယြေရှုသညက် သြေခြငက်းမရှ ထေမြာကက် ကြောငက်းကို တကျနြုပပို့သိ ကြသညက် ။ သို့ သောကြ် သသူ ၏သြေခြငက်းမရှ ရရှ ငက်ပြနက် ထေမြာကက် ခြငက်း၏ အမရှ နဓည်အိပ္ပါယ်ား အဘယယ်န ညက်း။ ယြေရှု၏သြေခြငက်းမရှ ရရှ ငက်ပြနေ ညမြာကက် ခြငက်းသညက် သသူ သညက် ဧကနည်အမရှနက် ဘုရားသခငက် ၏သားတြောက်ြဖြစက် ခြငက်းနြရြှ ငက် င့် သသူ ဟြော ပြောခခင့် သြော အေကြာငက်းအရာမဗားအားလစံြုးသညက် အမရှ န ပရားဖြစက် ပေ၏။ သငက် ၏ကယပ ငက် ခြငက်းနြရြှ ငက် င့်ပတင်သ ကက်၍ သစံ သယရရှိ ခြငက်း၌ သင ည င်သ က် ပြသနာမဗား ရရှိ နြေခခင့် သြောကြ်၊ သို့ မဟုတက် ကဗမက်းစာအေပါ် ယစံြုကြညကှုအရာ၌ သစံ သယဖြစက် နေသာ မိ တက်တေဆမဗား သငက် ၌ ရရှိ နြေခခင့် လရှ ဗြငက် ထို အရာမဗားအားလစံြုးကို ခဏေဘးဖယညားလဗကက် အေကြာငက်းအရာအားလစံြုးကို ဤမြေးစခနက်းအေပါ် ဆစံြုးဖြတက စက်ဆေးမှုကို ပြု ပါ။ ယြေရှုခရစ င်သညက် ဧကနည်အမရှနက်သေခခင့် ပါသလား။ သသူ သြူ သညက် ဧကနည်အမရှနက် တဖနက် ထေမြာကက် ခခင့် ပါသလား။ ဧကနည်အမရှနက်ဖြစစါသညက် ။ သသူ သညက် ဧကနည်အမရှနက်သေခခင့် ၏။ သသူ သညက် ဧကနည်အမရှနက် တဖနက် ထေမြာကစ်ခခ င့်၏။ ထို့ ကြောငက် င့် သသူ သညက် ဘုရားသခငက် ၏သား ဖြစက် ခြငက်းနြရြှ ငက် င့် သသူ ဟြောပြောခခင့် သမရှ ဗြေ သာ အရာမဗားအားလစံြုးတို့ သညက် အမရှ နက်ဖြစက် ကြောငက်းကို တကျနြုပပို့ သိ ကြ၏။ တကျနြုပပို့ သညက် သသူ့ အေပါ် အပြညက် အ င့် ဝ ယစံြုကြည်ိုးစားခြငက်းကို ပြု နြို ငစါသညက် ။ ကဗမက်းစာက ''သြေခြငက်းမရှ ထေမြာကက် တောကြ် မသူ ၍၊ သနက့်ရရှ ငက်းသြော ဝိ ညာဥက်တောကြ် အားဖြငက် င့်၊တနစ်ခိုးနြရြှ ငက် င့်တတက ဘုရားသခငက် ၏သားတြောကြ် ထငက် ရရှားဖြစက် တောကြူသြော ငါတို့  သခငက် ယေရှု ခရစပညက်း ဟသူ သြော မိ မိသားတြော်ိုအေကြာငက်းပြု ၍...မိ မိအသကက် ရရှငက်ကြောငက်းကို ခို ငစ်ခ နက့်သော သကက် သေအမဗားအား ဖြငက် င့်ပြေတာကြူ၏'' ဟုဆို ၏။(တ၊၁း၃) ယြေရှုက ငါသညက် ''အသကက် ရရှငက်သော သသူ လညက်းဖြစက် ၏။ ငါသညက် အရငက် သေသညက် ဖြစက် ၍၊ ကမ္ဘာအဆကက်ဆ ကက် အသကက် နရြှ ငက် င့် ပြညက် င့်စစံြု၏။.ထို နြောကက် ရရှ စင်ရကက်မြောကက် သောနြေ့၌ တပညက် င့်တြောကြဗားသညက် တဖနက် ယခငည်အခနက်း၌ ပြနစံြ က်ဆုကြ၏။ သြောမသညင်လ ညက်းဤအခဗိနက် ၌ သသူ တို့ နရြှ ငက် င့်အတသူ ရရှိ တြောကြူ၏။ တဖနက် ယြေရှုသညင်သူတို့ ၌ ပြေါ်လာပြဦး''သငပို့၌ ငြိမ က င်သ က် ခြငက်းရရှိ စြေသတညက်း''ဟု မိ နက့်တောကြူ၏။ ယြေရှုသညက် သြောမထစံ သို့ လရှ ညက်၍ င့် '' သငက် ၏လကက် ညြှုိးကို ဆနက့်၍ ငါင့်လက်ို ကြညက် င့်လြောင့်။ သငက် ၏လက်ိုဆနက့်၍ ငါင့်နစံဖြေးကို စမက်းသပက် လောင့်။ ယစံြုမရှားခြငက်းမရရှိနရြှ ငက် င့်။ ယစံြုလြောင့်ဟု မိ နက့်တောကြူ၏။'' သြောမသညင်လ ညက်းယစံြုမရှားခြငက်းမရရှိ တြောင့်ပါ။ သြောမကလညက်း၊ ''အတကျနု ပက် ၏အရရှငက်၊ အတကျနု ပက် ၏ ဘုရားသခငက် ပါတကား ''ဟု ပြနက်၍လြေရှ ဗြာကင်လ ဗကက် ကိုးတကယက် လေ၏။ (ယြော၊၂ဝး၂၈) သခငက် ယေရှုသညက် သင်္ခဗြုိငက်းမရှ ထေမြာကက် ပြဦးနြောကက် ဤမြေကြဦးပြေါ်၌ ရကက် ပေါငက်းလြေးဆယပိုငက် ကို ယည ငက်ရရှား ပြ တြောကြ် မသူ ၏။ ကဗမက်းစာ၌ ယြေရှုသညက် သသူ ရရှ ငက်ပြနေ ညမြာကက် ပြဦးနြောကက် အဖြစည်အပဗကက် အနညက်းဆစံြုး ဆယက် ကြိ မက ည က် မနညက်းတပညက် င့်တြောကြ် တို့ အား ကို ယည ငက် ရရှား ပြေတာကြူခခင့် ကြောငက်းကို ပြောဆို ထားပါသညက် ။ ကဗမက်းစာက ''အေသခစံ တြောကြူပြဦးလရှ ဗြငက်၊ တမနက်တောပြို့အား အရကက် လေး ဆယစ တစံ င်လြုး ကို ယ်ိုပြ၍..
သြေပြဦးနြောကက် ဘုရား၏သားသမဦးမဗား တဖနည်အသကက် ရရှငက်ခြငက်းကို ဘုရားသခင ည င်သ က် ကတိ ပြု ထားခခင့် ပါသညက် ။ သသူ သညက် ဤအမှုကို ပြု လုပက် နြို ငစါသလား။ အမရှ နစငက် သသူ ပြု လုပက် နြို ငစါသညက် ။ မည် ခ သ င့်ို့  တကျနြုပပို့ သိ နြို ငစါသနညက်း။ သသူ သညက် ယြေရှုကို ထေမြာကက် စေခခင့် သြော ကြောငက် င့် ဖြစ ည င်သ က် ။ ယြေရှုက ''ငါသညက် အသကက် ရရှငက်သောကြောငက် င့် သငပို့သညင်လ ညက်းအသကက် ရရှငက် ရကြလိ မက်မင့် ညက် ။''ဟုဆို သညက် ။ (ယြော၊၁၄း၁၉) တဖနက်ယေရှုက'' ယြေရှုကလညက်း၊ ငါသညေည မြာကက် ခြငက်းအေကြာငက်း၊ အသကင်ရ ငက်ရှ ခြငက်းအေကြာငက်းဖြစက် ၏။ ငါင့်ကို ယစံြုကြညက် သော သသူ သညက် သြေတလနက်သောင်ြလညက်း ရရှင မက်င်လိ င့်မညက် ။''ဟုဆို ပြနက်၏။(ယြော၊၁၁း၂၅) ခရစစ်ယာထနက်တွယာကက် ထသြပြပီးထနြာကက် ဘာထဆြတ ဖြစစမိ မက် ခဲ့မညည်န ညက်း တကျနြုပပို့သညပ ဖနက် အသကက် ရရှငက်ခြငက်းသို့ ရောကင်လိမက်မင့် ညက် ဖြစက် ကြောငက်းတကျနြုပပို့ သိ နြေကြသညက် တ င့်ို ငက် ခရစစ်ယာနက် တေယာကက် သြေခခင့် လရှ ဗြငက် ဘာတြေတ ဖြစင်လိ မက် င့်မညယ်န ညက်း၊ စေသာ မြေးစခနက်းမဗားသညက် တကျနြုပပို့၌ရရှိ နြေပါသညက် ။ တကျနြုပပို့ ဘယ်ို တသားကြ မညယ်န ညက်း။ တကျနြုပပို့၏ ကို ယစ်ခ န္ဓာ၌ အဘယ် ခ သ င့်ို့ ဖြစက ညယ်နညက်း။ ကြောငက်းကငစံြ သ်ဘု၌ တကျနြုပပို့ မည် ခ သ င့်ို့  ဖြစင်လာလိ မက် င့်မညယ်န ညက်း။ ကြောငက်းကငစံြ သ်ဘု၌ တကျနြုပပို့ ခဗစစ်ခငက်သော သသူ မဗားနြရြှ ငက် င့် သိ ကြလိ မက်မင့် ညင်လား။ ဤမြေးစခနက်းမဗားသညက် အတလနက ရှ အေရးကြဦးပါသညက် ။ ဤ အေကြာငက်းအရာမဗားနြရြှ ငက် င့် ပတင်သ ကက်၍ ဘုရားသခငက် ၏နြှုတ် ပတက် တောကြ ရှ မည် ခ သ င့်ို့  ပြောဆို ထားကြောငက်းကို တကျနြုပပို့ ကြညက် င့်ကြ ရမညက် ။ (၁)ခရစစ်ယာထနက်တွယာကက် ထသြခခခဲ့ ပြပီးထနြာကက် ဘာထဆြတဖြစစ်မ ညည်နညက်း။ ယြေရှုခရစက် နရြှ ငက် င့်အတသူ နြေရနက် သသူ တထတကင်သားသညက် ။ ကို ယစ်ခ န္ဓာသညက် င်သ က် မြေကြဦးထခ တတငက် မြု ပာညးသညက် ။ သို့ သောကြ် လသူ ပုဂ္ဂြိြုလက် ဖြစက် သြော၊ စိ တက်နရြှ ငက် င့်ဝိ ညာဥ ည ခဗကက်ခြငက်းပငက် သခငက် ယေရှုနြရြှ ငက် င့်အတသူ နြေရနက် တထတကင်သားသညက် ။ တမနက်တောက်ြရရှ ငက်ပေါလု က ''ငါ အသကက် ရရှင ည င်သ ည်အ ရာမရှာခရစက် တောက်ြဖြစက် ၏။ သြေလရှ ဗြငကူကား၊ သာ၍အကဗြုိးရရှိ ၏။''ဟုဆို ၏။(ဖိ ၊၁း၂၁) ရရှ ငက်ပေါလု က ဘာကြောငက် င့် သြေလရှ ဗြငာင်သ ၍ ''အကဗြုိး'' ရရှိ သညက် ဟုပြောဆို ရသနညက်း။ အဓိ ပ္ပါယကာရှ ခရစက် တောကြ် နြရြှ ငက် င့်အတသူ နြေရနက် တသားခြငက်းဖြစ ည င်သ က် ။ ခဗစစ်ခငေင်ရ သာ ခရစစ်ယာန ပဥဦးေသြေသာအခါ တကျနြုပပို့သညက် အတလနက်ဝမက်းနညက်းကြသညက် ။ ဤကား ဓမ္မတာပငက် ဖြစ ည င်သ က် ။ သသူ့ ကို တကျနြုပပို့ အတလတန င်လ မက်းတဆတက် သောကြောငက် င့် ဖြစ ည င်သ က် ။ သို့ သောကြ် တကျနြုပပို့ သိ ထားရနကာရှ သသူ တို့ သညက် ခရစက် တောကြ် နြရြှ ငက် င့်အတသူ ရရှိ နြေခြငက်းသညက် ဤနြေရာမရှာရရှိ နြေခြငက်းထကက် အတလနကသာ၍ကြောငက် ရှးလေရှ ပသညက် ။ (၂)ဆကျနကြိုပုက်တွမိ့ ၏ကမိကို ယင်ခ န္ဓာ၌ မညည ခသ ခဲ့ မိကို့ ဖြစစ်မ ညည်နညက်း။ ခရစစ်ယာနက်ေသြေသာအခါ ခန္ဓာကို သင်္ခဗြုိငက်း တတငာညးပါသညက် ။ ခန္ဓာသညက် ''ခရစက် တောကြ်၌ အိ ပက်ပေဗာက်ြခြငက်း'' ဟုဆို ပါသညက် ။ ယြေရှု တဖနက် တြကလာသြောအခါ တကျနြုပပို့၏ခန္ဓာကို ထေမြာကက် စြေလိ မက်မင့် ညက် ။ ခန္ဓာအသစုိ ပြေးလိ မက်မင့် ညက် ။ တကျနြုပပို့၏ခန္ဓာကို အိ မလ ပ စံြုး အဖြစက် ပြောဆို ထားပါသညက် ။ တမနက်တောက်ြရရှ ငက်ပေါလု က''ယာယဦ တခဖြစက် သော ငါတို့ မြေအိမ ည င်သ စဗကင်လဗြရှ ငက်၊ ကြောငက်းကငစံြ သ်ဘု၌ လသူ လကက် ဖြငက် င့်မလု ပသ်ဘခ ၊ ဘုရားသခငက်ဖွန ငက်ဆ က်းတြောကြူသြော နိစ္စထာဝရအိ မက်ရရှိကြောငက်းကို ငါတို့ သိ ကြ၏။''ဟုဆို သညက် ။(၂ကော၊၅း၁) ဤနြေရာ၌ ရရှ ငက်ပေါလု က ဘာပြောပါသနညက်း။ သသူ က ''ငါသညက် သြေခခင့် သြောကြ်၊ ငါ၏ခန္ဓာသညက် မြေသို့ ပြစနာင်သးမညက် ။ တေန့သောအခါ အင့်စံတဘယက် သော ခန္ဓာသစုိ ပြေးရနက် .
ဘုရားသခင ည င်သ က် သသူ ကို ယပိုငက် တကျနြုပပို့အတတကက် ပြု လုပက် ပြေးလိ မက်မင့် ညက် ။ တကျနြုပပို့ သညက် ကြောငက်းကငစံြ သ်ဘု၌ အစဥက်နေရေပလိ မက်မင့် ညက် ။ (၃)ထကြာငက်းကငတ်ခံ ကြို င ၌ ဆကျနကြိုပုက်တွမိ့ မညည ခသ ခဲ့ မိကို့ ဖြစစ်မ ညည်နညက်း။ သခငက် ယေရှုနြရြှ ငက် င့် တသူ လာလိ မက်မင့် ညက် ။ သသူ ၏ဘုနက်းနြရြှ ငက် င့်ပြညက် င့်သြော ရရှ ငက်ပြနေ ညမြာကက် ခြငက်းကခင့် သို့ သော ခန္ဓာကို ရရရှိ ကြလိ မက်မင့် ညက် ။ ကဗမက်းစာက ''ခဗစ င်သူတို့ ယခုတတငက် ငါတို့ သညသ်ဘုရားသခငက် ၏သား ဖြစက် ကြ၏။ နြောကက ရှ အဘယင်သို့သောသသူ ဖြစက ညက်ဟု မထငက် ရရှားသြေး၊ သို့ သောင်ြလညက်း ကို ယက် တောင်ြသညက် ထငက် ရရှား ပြေါ်တထနက်းတြောကြူသြောအခါ၊ ငါတို့ သညက် ကို ယက် တောက်ြနရြှ ငက် င့် တသူ ကြလတစံင့် ဟု ငါတို့ သိ ကြ၏။ အေကြာငက်းမသူ ကား၊ ကို ယက် တောကြ် ဖြစက် တောကြူသညက် င့်အတို ငက်းကို ငါတို့ သိ မြငင်ရ ကြလိ မက် င့်မညက် ။''ဟုဆို ၏။(၁ယော၊၃း၂) (၄)ထကြာငက်းကငတ်ခံ ကြို င ၌ ဆကျနကြိုပုက်တွမိ့ ၏ခခစင်ခငင်ခခ ခဲ့ထရသာသသူ မခားနြရြငက် ခဲ့ ဆကျနကြိုပုက်တွမိ့ သမိ ကြလမိ မက် ခဲ့မညစား။ တကျနြုပပို့ သိ ကြလိ မက်မင့် ညက် ။ ကြောငက်းကငစံြ သ်ဘု၌ ခရစက် တောင်ြသညက် တကျနြုပပို့ကို သိ သကခင့် သို့  တကျနြုပပို့သညက် အခဗငက်းခဗငက်း တေယာကက် နရြှ ငက် င့် တေယာက်ို သိ ကြလိ မက်မင့် ညက် ။ ကဗမက်းစာက''ယခုတတငက် ငါတို့ သညက် မရှ နာည်အးဖြငက် င့် ရိ ပိက လဗကင်သာ နြေကြ၏။ ထို အခါ မသူ ကား၊ မဗကက်မေရှာကက် ထင ညငက် မြငင်ရ လိမက် င့်မညက် ။ ယခုတတငက် ငါအသိ အမြငက စစြုံမလငက် ဖြစက် ၏။ ထို အခါမသူ ကား၊ သသူ တပါးသညနါင့်ကို သိ သ ကခင့် သို့  ငါသိ ရလိ မက်မင့် ညက် ။''ဟု ဆို ၏။(၁ကော၊၁၃း၁၂) သခငက် ယေရှုခရစ င်သညက် သငက် ၏ကယပ ငက် ရရှငက် ဖြစစါသလား။ သသူ သညက် သငက် င့်ကို ပို ငက် ကြောငက်းကို သင ည င်သ က် သိ ပါသလား။ သို့  ဖြစက် သောကြ် သင ည င်သ က် သြေခြငက်းကို ကြောကင်ရ နက် မလို တြောင့်ပါ။ ဘုရားသခငက် ၏သားသမဦးမဗားအတတကက် သြေခြငက်းသညက် ကြောငက်းကငက် ဘစံြုသို့  ရြောကင်ရ နစံ ခါးတခ ပုဖြစက် ပြဦ ၊ တကျနြုပပို့သခငက် ၏မဗကက်မေရှာကက် တောညြခ ၌ တကျနြုပပို့ ထာဝစဥက် နြေရေပလိ မက်မင့် ညက် ။ ထယြရှုခရစင်သညက် ထထမြောကက် ခြငက်းအရရ င င်သခငက် ဖြစင်သညက်။ သသူ သညက် အသကက် ရရငက် ထသြာထကြာငက် ခဲ့ ဆကျနကြိုပုက်တွမိ့ သညစ ညက်း အသကက် ရရငက် ရကြလမိ မက် ခဲ့မညက် ။ ထမြးစခနက်းမခား ၁။ “ဧ၀စြံ ဂြေလိ ”ဟသူ သြော စကား၏ အဓိ ပ္ပါယကာရှ သတငက်းကြောငက်းဖြစ ည င်သ က် ။ ၁ ကြော ၁၅ အရ ဧ၀စြံ ဂြေလိ တရား ဟသူ သညကာ၊ရှ (က) ကယပ ငက် ခြငက်းသို့ ရောကင်ရ နက် ပညတက် တောကြ် ဆယစါးကို ကတျနြုပပို့ စြေါငက် င့်ထိ နက်းရမညက် ။ (ခ ) ယြေရှုခရစက် တောကြ် ကတျနြုပပို့အပြစကဗားအတတကက် အေသခစံ ခြငက်း၊ မြု ပက်နရြှစံ ခြငက်းနြရြှ ငက် င့် ထာဝရအသကက် ရရှငက်ခြငက်းဖြစ ည င်သ က် ။ (ဂ ) ကယပ ငက် ခြငက်းသို့ ရောကင်ရ နက် ယြေရှု၏နမသူ နာ အတို ငက်းကတျနြုပပို့ လို ကက် လေရှ ဗြာကင်ရ မညက် ။ ၂။ သသူ သညက် ထအသ သတက် ခြငက်းမခတ်ခံ မရပီ သခငက် ထယရှုက တပညက် ခဲ့ထတြာစ်ြမခားကမိကို ထပြာခခခဲ့ သညစ်မာ၊ရ (က) ထနြာငင်အခါ သသူ ၌ မညည ခသ ခဲ့ မိကို့  ဖြစစမိ မက် ခဲ့မညစ်မာရ ထမသခခာပါ။ (ခ ) သသူ ၌ လသူ ထကေို ပရမိ သတည မညည ခသ ခဲ့ မိကို့  ပြု လမိမက် ခဲ့မညည မိုသသူ ထကြာကက် ရတ်ခံ စ့ ခြငက်းရရမိ သညက် ။ .
(ဂ ) သသူ သညက် ဒကို က္ခဆွငက်းရခ ခတ်ခံရမညက် ၊ ထအသသတက် ခြငက်းခတ်ခံ ရမညက် ။ သတ်ခံ ကြိုးရကက် ပြပီးထနြာကက် တဖနက် ထထမြောကစ မိ မက် ခဲ့မညက် ။ ၃။ သခငက် ထယရှုက ယကို ဒလသူ တမိကို့အား သသူ သညက် ဘကို ရားသခငက် ၏သားထတြာကြ် ဧကနင်အမရနက် ဖြစက် ထကြာငက်းကမိကို သကက် ထသပြရနက် မညင်သ ညက် ခဲ့ နမမိ တစက္ခဏာ တခကို ကမိကို ထပြးခခခဲ့ ပါသနညက်း။ (က) အခဲ့ တ်ခံ ဆဘယည်န မမိတက် လက္ခဏာမခား။ (ခ ) ထပရာဖကက် ထယြာန၏နမမိ တစက္ခဏာ (ဤကား သသူ သညက် ထအသခတ်ခံ ခြငက်းနြရြငက် ခဲ့ ထထမြောကက် ခြငက်းဖြစင်သညက် )။ (၈ ) ထပရာဖကက် အာမကို တက် ၏ နမမိ တစက္ခဏာ။ ၄။ သခငက် ထယရှု ထသြခြငက်းမရ ထထမြောကက် ထသါ အခါ၊ (က) သသူ သညက် အရမိကိုး၊ အသား မရရမိ ထသြာ ၀မြိ ညာဥက် နြရြငက် ခဲ့ ဖြစင်သညက်။ (ခ ) ထယြရှု တဖထန န်ထမြောကက် ခြငက်းကမိကို တပညက် ခဲ့ထတြာစ်ြမခားသာလရ ခြငက် မြငက် ထဆတ့ရသညက် ။ (၈ ) အရမိုး၊ အသားရရမိ ထသြာ ခန္ဓာနရြငက် ခဲ့ သသူ သညက် ရရ ငက်ပြထန န်ထမြောကင်ခ ခ ခဲ့သညက် ။ ၅။ ထယြရှု သင်္ခခြုမြိငက်းမရ ထထမြောကင်ခ ခ ခဲ့သညည မိုတပညက် ခဲ့ထတြာစ်ြမခား မညည ခသ ခဲ့ မိကို့  သမိ ခခခဲ့ပါသနညက်း။ (က) သသူ ၏ခန္ဓာ သင်္ခခြုမြိငက်းဂသူ ၌ မရရမိ ထတြာခဲ့ ခြငက်း။ (ခ ) တပညက် ခဲ့ထတြာစ်ြမခား သသူ့ ကမိကို မြငင်ရ သညက် ၊ သသူ့  ကမိကို တမိကို့ ထမေိ ရသညက် ၊ သသူ နရြငက် ခဲ့ စကားထပြာရသညက် ၊ သသူ နရြငက် ခဲ့အတသူ စားထသြာကက် ကြရသညက် ။ (ဂ ) တစတ်ခံ ကြိုထတယာကည တပညက် ခဲ့ထတြာစ်ြမခားကမိကို ထယြရှု ထထမြောကက် ထကြာငက်းထပြာခခခဲ့ သညက် ။ ၆။ သခငက် ထယရှုသညက် ထသြခြငက်းမရ ထထမြောကက် ပြပီးထနြာကက် သသူ ၏တပညက် ခဲ့ထတြာစ်ြမခားကမိကို ကမိကို ယက် ထငေက် ရရားပြခခခဲ့ သညက် ။ (က) အနညက်းဆွတ်ခံ ကြိုး ဆွယက် ကြမိ မက န်ထေ က် မနညက်း၊ (ခ ) အကြမိ မက် အနညက်းငယစ်မ ခြရ သာလရ ခြငက်။ (ဂ ) တကြမိ မည က်တွ က်းသာ။ ၇။ ထယြရှု၏ရရ ငက်ပြထနြ န်ထေ မြရာကက် ခြငက်းထကြာငက် ခဲ့ ကဆျနကြိုပုက်တွမိ့ သမိ ရသညစ်မာ၊ရ (က) အခခုမြိ့ထသာ ခရစစ်ယာနစ်မခား ထသြပြပီးထနြာကက် တဖနက် ထထမြေရာကက် ခြငက်းကမိကို ခတ်ခံ ရလမိ မက် ခဲ့မညက် ။ (ခ ) ဘကို ရား၏သားသမပီးမခား အားလတ်ခံ ကြိုး ထသြပြပီးထနြာကက် အသကက် ရရငင်ရကြမညက် ဖြစက် ထကြာငက်းဘကို ရား ကတမိ ထတြာက်ြရရမိသညက် ။ (ဂ ) ခရစစ်ယာနက် အနညက်းငယစ်မ ခြရ သာ ထသြပြပီးထနြာကက် ထယြရှုကမိကို မြငက် ထဆတ့ ရလမိ မက် ခဲ့မညက် ။ ၈။ ခရထစက်တွယာကက် ထထြသသာအခါ၊ င်သ က် (က) ကမိကို ယင်ခ န္ဓာ သင်္ခခြုမြိငက်း၌ မြု ပက်နရြတ်ခံ သညက် ။ သမိကို့ ထသာကြ် သသူ ၏ စမိ တက်နရြငက် ခဲ့ဝမြိ ညာဥ ည သခငက် ထယရှုနြရြငက် ခဲ့အတသူ ထနြရနက် တခဏခြငက်းဆသားထရြာကင်သ ညက်။ (ခ ) သသူ သညက် အပြစင်သား ဖြစင်သညက် ခဲ့အဆတကက် တရားစပီ ရငက် ခြငက်းကမိကို ခတ်ခံ ရလမိ မက် ခဲ့မညက် ။ခြဲ့ သသူ ၏အပြစစ်မခားအဆတကက် ထပြးဆွပင်ရ လမိမက် ခဲ့မညက် ။ .
(ဂ ) သသူ သညက် ထကြာငက်းကငတ်ခံ ကြို င (သမိကို့ ) ငရခ တခကို ခကို ဆတငက် ထရြာကက် ရရမိလမိမက် ခဲ့မညက် မရာသသူ ၌ ထမသခခာပါ။ ၉။ တမနက် ထတာက်ြထပါလကို က သသူ ထသြပြပီးထနြာကက် သခငက် ထယရှုနြရြငက် ခဲ့အတသူ ထနြရနက် ဆသားရလမိ မက် ခဲ့မညည မိုသသူ သမိ ထသြာထကြာငက် ခဲ့ ဖမိ လမိပ္ပမိ ၁း၂၁ ၌ ထရြးသားခခခဲ့ သညစ်မာ၊ရ အမရ နက က်တွ ယက် ထသြလရ ခြငစ်မူကား သာ၍၊ (က) သမိ တက် မဆွမိကိုးရစားပါ။ (ခ ) အထမေိ တက်တွလနက့် ဖြစက် ခြငက်းနြရြငက် ခဲ့ ထမသခြာ ထမရရာ ဖြစက် ခြငက်းဖြစင်သညက်။ (ဂ ) အကခုမြိးရရမိ သညက် ။ ၁၀။ ထကြာငက်းကငတ်ခံ ကြို င ၌ ကဆျနကြိုပုက်တွမိ့  မညည ခသ ခဲ့ မိကို့  ဖြစ မက်စမိ ခဲ့နညည်န ညက်း။ (က) ကဆျနကြိုပုက်တွမိ့ သညက် ယခကို ဤ ထနြရာ ထမြကြပီးထပြါ်မရာကခခဲ့ သမိကို့  ပငက် အတသူ သြူတသူ နပီးပါးပငက် ဖြစက် ကြလမိ မက် ခဲ့မညက် ။ (ခ ) ကဆျနကြိုပုက်တွမိ့ သညက် ထကြာငက်းကငက်တွမနစ်မခားကခခဲ့ သမိကို့  ထအတာငစ်မခား ရရမိ လာလမိ မက် ခဲ့မညက် ။ (ဂ ) ကဆျနကြိုပုက်တွမိ့  ထယြရှုနြရြငက် ခဲ့ တသူ လာကြ လမိ မက် ခဲ့မညက် ။ ဤ သငင်ခ နက်းစာကမိကို သင ည င်သ က် ထလြခဲ့ လာခခခဲ့ ပြပီးဖြစင်သညက်။ ဘယင်အ ရာသညက် ထအရးကြပီးဆွတ်ခံ ကြိုး ဖြစစ်ပါသနညက်း။ သခငက် ထယရှုခရစင်သညက် သငက် ၏ ကယက်တွ ငက် ရရငက် ဖြစစ်ပါသလား။ သငက် ခဲ့ကမိကို သသူ ပမိကို ငုငက် ငမိ ထကြာငက်းကမိကို သင ည င်သ က် သမိ ပါသလား။ သမိကို့ ဖြစက် ထသာကြ် သင ည င်သ က် ထသြခြငက်းကမိကို ထကြာကစ်စွ ရာ မလမိကို ထတြာခဲ့ ပါ။ ဘကို ရား၏သားသမပီးမခားအဆတကက် ထသြခြငက်းသညက် ထကြာငက်းကငတ်ခံ ကြို င သမိကို့ ၀ငင်ရ နက် တတ်ခံ ခါးတခကို သာ င်အ မခ ဖြစက် ပြပီး၊ ထမေိကို ထနြရာ ကဆျနကြိုပုက်တွမိ့ သခငက် ၏ မခကက်ထမရာကက် ထတာက်ြရမိရ ရာ၌ ကဆျနကြိုပုက်တွမိ့  အစဥြ ထနြရကြလမိ မက် ခဲ့မညက် ။ အငင်ဒ ရသူး.
More From petermyintsoe5687